राष्ट्रपतिले प्रदान गरेको तक्मामा चुच्चे नक्सा नराखेर गम्भीर त्रुटी भयो : सांसद भुसाल - Dainik Online Dainik Online
राष्ट्रपतिले प्रदान गरेको तक्मामा चुच्चे नक्सा नराखेर गम्भीर त्रुटी भयो : सांसद भुसाल
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सचेतक पुष्पा भुसालले राष्ट्रपतिबाट प्रदान गरिएको विभुषणमा सरकारले गम्भीर त्रुटी गरेको भन्दै त्यसबारे प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गरेकी छन्।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सचेत भुसालले विभुषणमा नेपालको संसोधित नक्सा नराखिएकोमा गम्भीर आपत्ती जनाउदै त्यसबारे प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर जवाफ दिनुपर्ने माग गरेकी हुन।
उनले सरकारले संसोधित नक्सा नराखेर संसदको निर्देशन कार्यान्वयन नगरेको टिप्पणी गरिन्। नक्सा संसोधन भएपनि भूमि फिर्ता ल्याउने विषयमा सरकार गम्भीर नभएको, पाठ्यक्रममा समावेश गर्न रोकिएको र सो भूमिमा पुर्वाधार निर्माणका काम भईरहदा पनि उपयुक्त कदम नचालिएको भन्दै त्यसतर्फ गम्भीर आपत्ती जनाइन्।
उनले भनिन् “अहिलेको सरकारले राष्ट्रियता देखाउने चुच्चे नक्सा हराउने यो काहवत अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा छाएको छ। यो सदनबाट सर्वसम्मतबाट नक्सा पारित भएको थियो । सरकारले एउटा निर्देशन प्राप्त गरेको थियो। संसदबाट नक्सा पारित भएको छ। अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर सरकारलाई निर्देशन पनि गरेको थियो । तर सरकारले संसदले दिएको निर्देशनलाई पालना पटक पटक नगरेका धेरै उदाहरणहरु हामीले देखिराखेका छौं। कहिले नक्सामा संसोधन गरेका कुरामा भूमि फिर्ता ल्याउने काममा कुनै पहलकदमी नगरेका घटनाहरुपनि अगाडि आएका छन्। त्यस ठाउँमा पूर्वाधारका कामहरु अगाडि बढेका कुरा पनि आइराखेका छन् । ती नक्सालाई संसदबाट पारित गरिसकेपछि पाठ्यक्रममा संशोधन गर्ने भन्दाखेरी सरकारले त्यसलाई रोकेका घटनाहरु पनि बाहिर आइराखेका छन् । सभामुख महोदाय । सबैभन्दा ठूलो आपत्ति सभामुख महोदाय, जुन यही २७ गते महामहिम राष्ट्रपतिबाट जुन विभुषण प्रदान भएको छ त्यो विभुषणमा जुन किसिमबाट अहिलेको नक्सा संशोधन भएको प्रतिक जुन हटाएको छ त्यसको जिम्मेवारी सभामुख महोदाय यो सरकारले लिने कि नलिने ? यो गम्भिर भुल अहिलेको सरकारले गरेको छ । त्यसको जवाफदेहिता यो सरकारले सरकारको नेतृत्व गरेको स्वयं सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले लिने कि नलिने ? तर यत्रो ठूलो गम्भिर भुल सरकारले किन गरेको छ भन्ने कुरा संसदले संसदले जान्न खोजेको छ। संसदमा आएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले यसको जवाफ दिनको लागि हामी आग्रह गर्न चाहन्छौं।”
उनले नेपालको विकास हेर्न लखनउ जाउ भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपालीहरु नेपालको भूमिमा छौं कि छैनौं ? भन्ने भ्रम श्रृजना गर्ने काम गरेको टिप्पणी गरिन्।
सरकारले एमसिसीलाई संसदमा पेश नगरेर उल्टै एमसिसी पास गर्न दिईएन भनेर भ्रम छर्ने काम गरेको आरोप लगाइन्। उनले तत्काल एमसिसीलाई टेबुल गरि संसदीय प्रक्रिया अघि बढाउन पनि ध्यानाकर्षण गराइन्।
उनले भनिन् “हामीलाई दुःख लाग्यो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो नेपालमा यति धेरै विकास भएको छ यहाँबाट देखिन्न भने लखनउँबाट गएर हेरे हुन्छ नेपालमा कत्तिको विकास भएको छ भनेर उहाँले भन्दैगर्दाखेरी हामी नेपालीहरु नेपालको भूमिमा छौं कि छैनौं भनेर भ्रम सिर्जना गर्ने काम स्वयं सरकारको नेतृत्वले गरेको आफ्नो अभिव्यक्तिबाट गरेको छ । त्यसैले सभामुख महोदाय यस्ता अभिव्यक्तिहरु दिदैगर्दाखेरी राष्ट्रियताको आधारमा राष्ट्रियताको मूल्य मर्मलाई लिएर यस्ता किसिमका अभिव्यक्ति दिनका लागि पनि यही संंसदबाट सभामुख माफर्त हामी आग्रह गर्न चाहन्छौं । यहाँ धेरै राष्ट्रियताका कुराहरु भइराखेको छ । धेरै सत्तापक्षले पटक पटक भन्नुहुन्छ एमसीसीलाई यहाँ पेश गर्नुपर्छ एमसीसी यहाँ पास गर्नुपर्छ भनेर भनिराख्नु भएको छ । संसदको आफ्नो प्रक्रिया छ सभामुख महोदय । सरकारले प्रस्ताव ल्याउनुप¥यो, सरकारले एमसीसीलाई टेबुल गर्नुप¥यो अनिमात्रै कार्यविधि संसदमा अगाडि बढ्ने छ । सरकारले एमसीसीलाई टेबुल नगर्ने र पटक पटक एमसीसीलाई पास गर्न नदिने भनेर, संसदमा प्रवेश गर्न नदिने भनेर पटकपटक अभिव्यक्तिहरु आइराखेको छ । यसलाई तुरुन्त अगाडि बढाउनको लागि पनि सरकारको अगाडि हामी संसद मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छौं।”
उनले मुल्यवृद्धिले जनताको ढाड सेकिएको भन्दै त्यस तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
वर्तमान सरकारले महँगी घटाउन नसकेको, सुशासन कायम गर्न नसकेको तथा संविधानमा प्रत्याभूति गरेका कुराहरुको व्यवस्था गर्न नसकेको टिप्पणी गरिन।
उनले भनिन् “म सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु नेपाली जनता आज महँगीको मारमा परेका छन मूल्यवृद्धिबाट जनताको ढाड सेकिएको छ। ४/४ पटक तेलको भाउ बढेको छ। भ्रष्ट्राचार यति धेरै बढेको छ। त्यसको मूल्य जनताको करबाट चुकाउनु परेको छ।”